प्रविधि Archives - Page 53 of 56 - Purbeli News
वाईफाई भन्दा पनि शक्तिशाली लाईफाई प्रविधि छिट्टै नै बजारमा
एजेन्सी, डाटा कनेक्सन पनि राम्रोसँग नहुने हामीहरुका अगाडि एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ- वाईफाई भन्दा पनि शक्तिशाली लाईफाई प्रविधि छिट्टै नै बजारमा आउने भएको छ । लाईफाई प्रविधिको क्षमता वाईफाइको तुलनामा सय गुणा बढ हुने बताइन्छ । एजेन्सीहरुले जनाए अनुसार, वर्षौं को अनुसन्धानपछि यसलाई ल्इाबबाहरि प्रयोग गरिएको हो । लाईभाईको कनेक्टिभिटी गति एक जिबिपिएस...
पाँच गुणा बढी उर्जा सञ्चित गर्ने लिथियम ब्याट्रीको विकास
अमेरिकाको सिकागोस्थित युनिभर्सिटी अफ लोनोइसमा आवद्ध खोजकर्ताहरुले हाल प्रचलनमा भएका ब्याट्रीभन्दा पाँच गुणा बढी उर्जा सञ्चित गर्न सक्ने नेक्स्ट जेनेरेसनका लिथियम ब्याट्रीको विकास गरेका छन् । यस किसिमको ब्याट्रीले हालका ब्याट्रीमा देखिएको उर्जा सञ्चितिको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा खोजकर्ताहरुको छ । अहिले प्रचलनमा रहेका लिथियम–एयर ब्याट्रीहरुले अ...
कुशल श्रेष्ठ यो ब्रह्माण्ड अनि यो अन्तरिक्ष कति विशाल अनि रहस्यमय छ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यसको कयौं रहस्य विज्ञानले पनि अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन। यसको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो, यसको आकार कत्रो छ, अनि यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, अन्त्य हुने भए कहिले हुन्छ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर अझसम्म रहस्यमय नै छ। यसको बारेमा खो...
यो वर्ष ग्रहणका पाँच अनौठा दृश्य देखिने
काठमाडौं, खगोल विज्ञानमा रुचि राख्नेहरुलाई सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाको त्रिमुर्तिले यो वर्ष पाँच रोमाञ्चक दृश्य देखाउने छ । नेपालबाट भने जम्मा दुईवटा घटना देखिने अनुमान गरिएको छ । डॉ‍ राजेंद्र प्रकाश गुप्तले हन्द क्षेत्रको सन्दर्भमा गरेको कालगणना अनुसार यो वर्ष ग्रहणहरुको क्रम नौ मार्चका दिन पर्ने सूर्यग्रहणबाट सुरु हुने छ । पहिलाे ग्रहण नेपालको पू...
सौर्यमण्डलमा नयाँ ग्रह भेटियो, पृथ्वीभन्दा १० गुणा ठूलो
अमेरिकी खगोलविद्हरुले सौर्यमण्डलमा एक नयाँ ग्रह फेला पारेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो ग्रह पृथ्वीको आकारभन्दा १० गुणा ठूलो रहेको छ । क्यालिफोर्निया इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजीका शोधकर्ताले उक्त नयाँ ग्रहको नाम प्लानेट नाइन अर्थात् नवौँ ग्रह राखेका छन् । यो ग्रहले बरुण ग्रहभन्दा अरबौँ माइल टाढाबाट सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको छ । यद्यपि कम्प्युटर मोडलिं...
सोमबार, माघ ०४, २०७२
काठमाडौँ, ४ माघ । नेपाल टेलिकमले नयाँ सामाजिक सञ्चालका रूपमा ‘मिट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । लेख, तस्बिर, श्रव्य तथा दृश्यलाई एकार्कामा पठाउन सकिने सो सञ्जालको टेलिकम भोजपुर प्रमुख रामकुमार माझीसँग आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले कुराकानी गरेर उद्घाटन गर्नुभयो । सो सञ्जालबाट कम्पनीका विभिन्न सेवाका बारेमा ग्राहकसँग आवश्यक अन्तक्र्रियासमेत गर्...
ताप्लेजुङ सदरमुकाममा जडान गरिएको सिसी क्यामराको उद्धघाटन
सन्तोष पुर्कुटी / ताप्लेजुङ, ४ माघ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको आपराधिक क्रियाकलाप तथा सुरक्षा संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा जडान गरीएको सिसी क्यामेराको आज उद्धघाटन गरीएको छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने मुख्य उदेश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको सक्रियतामा जडान गरिएको उक्त क्यामेराको आज एक कार्यक्रमका विच मेची अञ्चल प्रहर...
सावधान ! कतै यि घातक एप्सहरु तपाँइको मोवाइलमा त छैनन ?
शुक्रबार, माघ ०१, २०७२
एजेन्सी, अहिले मोवाइलमा रमाउनेहरुका लागि अनेक सुविधा सहितका लाखौं एप्सहरु बनिसकेका छन् । तपाँइ हामि पनि आकर्षक लाग्ना साथ नयाँ एम डाउनलोड गरिहाल्छौ । तर के तपाँइले कहिले ख्याल राख्नुभएको छ कि कतिपय एपहरु मोवाइलका लागि घातक हुन्छन भनेर ? यस्तै मोवाइलका लागि असुरक्षित मानिएका केहि एप हरु गुगलले प्लेस्टोरबाट हटाएको छ । कतै यि एपहरु तपाँइको मोवाइलमा त ...
३० सेकेण्डमै चेक गर्नुस्, तपाइँ कति सुन्दर हुनुहुन्छ
बिहिबार, पौष ३०, २०७२
के तपाइँले आफ्नो सुन्दरताको मापन आफै गर्नुभएको छ ? आफु कति सुन्दर छु भन्ने कुरा कहिल्यै जान्नुभएको छ ? आफ्नो सुन्दरतालाई कहिल्यै अंक दिनुभएको छ ? आफ्नो सुन्दरताको मापन आफै गर्ने भन्ने कुरा सजिलो होइन । तर अब यो अप्ठेरो कामको गाँठो फुकाउने गरी एउटा वेबसाइट आएको छ । यो एउटा यस्तो वेबसाइट हो जसले पूरै इमान्दारीताका साथ बताइदिनेछ की तपाइँ कस्तो देखि...
यूट्युबले सुरु गर्‍यो नेपाल होमपेज
बुधबार, पौष २९, २०७२
पुस २९, २०७२- यूट्युबले नेपाललाई लक्षित गरेर होमपेज सुरु गरेको छ । नेपाल सहित मंगलबारदेखि यो सुविधा पाकिस्तान र श्रीलंकामा सुरु गरेको हो । अब यूट्युब खोल्दा यूट्युबको होमपेजमा ‘युट्युब एनपी’ भन्ने देखिन्छ । यो सुविधा सुरु भएपछि होमपेजमा नेपालमा चलेका यूट्युबका भिडियोहरु देखिन्छ । यस्तै केही पहिला देखि नै नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध भएको यूट्युब कस...